Vanoba 300 iPhone X pavaienda kunounzwa muApple Chitoro | IPhone nhau
Sezvo Apple ichizadzikisa iCloud pazvigadzirwa zvayo, nhamba yePhones dzakabiwa dzadonha zvakanyanya, nekuti kana tisingazive iyo password yeICloud hazvigoneke kubatanidza imwe account neiyo iPhone nekuishandisa sekuti tanga tazvitenga zviri pamutemo . Iri dambudziko risati rasvika, shamwari dzemutorwa dzakasvika pamhedziso kuti nzira yakanakisa yekudzivirira dambudziko iri ndeyekubira zviteshi zvisati zvabatana neaccount, ndiko kuti, zvakananga muApple Chitoro. Haisi yekutanga kana yekupedzisira nguva yatinotaura nezvembavha yakaitika muApple Chitoro, asi nhasi iri kunyanya kurova sezvo iri nyowani iPhone X.
Varume vatatu vakapfeka ngowani vakapaza rori rakamiswa reUPS paSan Francisco Mall uye vakaba vangodarika mazana matatu emaX X, akakosha kuita $ 300, maererano nenhau dzemuno. Chiitiko ichi chakaitika pakati pa11: 15 mangwanani na11: 30 mangwanani neChitatu chakapfuura. Mutyairi weUPS akakiya mota mushure mekupaka kunze kweStonestown Galleria Mall uye ndokutyaira kuenda kuna Macy kunoita hurukuro. Munguva iyoyo, mbavha dzaive nenguva yakakwana yekupinda nekubuda mutiraki rekutakura uye kutora 313 iPhone X yeiyo 64 GB modhi yaifanira kuendeswa kuApple Chitoro.
Kubva kuDhipatimendi reMapurisa reSan Francisco, anoti mbavha idzi dzaive dzichiteedzera rori uye vaiziva zvavaitsvaga. Tichifunga kukosha kwedhora kwechiitiko ichi, zvinotevera kuti kuba kwacho kwakarongwa kare. Vaviri UPS neApple vari kushanda padhuze neSan Francisco Police department. Tichifunga nezve kuti Apple ine ruzivo rweImEI yezvinhu zvese zvabiwa, kukosha kwechokwadi kwemusika weichi chinhu kune mbavha zero zero madhora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Vanoba 300 iPhone X pavaienda kunounzwa muApple Chitoro
Murume, zvakaringana zero zero ... zvinogona kugara zvichitengeswa nezvidimbu, uye tichifunga kuti iri modhi ichangobuda, zvikamu zvekuchengetedza zvinodhura. Imwe pini (uye kwete diki) ichatora, ndezvechokwadi.